भारतबाट बिजुली किनेर लोडसेडिङ हटाइयो, कुलमानजी हल्लाबाटै ‘हिरो’ : भट्टराई — OnlineDabali
लक्ष्मीपूजाको दिन देशैभरी लोडसेडिङ नभएको भन्दै सामाजिक संजालमा घिसिङलाई धन्यवाद आइरहेको बेला भट्टराईले सामाजिक संजालमा लोडसेडिङका कारण ठूला जलविद्युत आयोजना अपरिहार्य भइरहेको बेला भारतबाट बिजुली किनेर लोडसेडिङ हटाएर मेगा प्रोजेक्टबाट पछि हटेको बताएका छन् ।
“लोडसेडिङका कारण नेपालमा ठूला जलविद्युत आयोजना अपरिहार्य भइसकेको थियो । जसरी भएपनि ठूला आयोजना सुरु गर्न हामी बाध्य हुँदै थियौं । त्यही बेलामा भारतबाट बिजुली किनेर लोडसेडीङ हटाइयो । अब उज्यालो पाएपछि किन चाहियो मेगा प्रोजेक्ट ? काम त चलीहाल्यो नी” भट्टराईले लेखेका छन् ।
नेपालका नदी–नालाको पानी आफ्नो स्वर्थको लागि दोहन गर्न पाइयोस् भनेर भारतले मेगा प्रोजेक्ट नबनोस् भन्ने चाहेको भन्दै भट्टराईले भरतको यही स्वर्थका कारण घिसिङ हिरो भएको दाबी गरे । भट्टराई अगाडि लेख्छन्, “नेपालमा बिजुलीका लागि मेगा प्रोजेक्ट नबनोस्, नेपालका नदी–नाला चाहिँ उसले आफ्नो पानीको स्वार्थका लागि दोहन गर्न पाइरहोस् । कुलमानजी भारतको यही रणनीतिक स्वार्थको उहापोहमा हिरो बनाइनुभएको हो । बाँकी कुरा सब फजुल हो ।”
जलश्रोतको धनी देशले भारतबाट उसले उपभोग गरेर बचेखुचेको रहल पहल बिजुली किनेर त्यसकै उज्यालोमा रमाउनु भनेको नकचरो पन भएको भट्टराईले यो हुतिहारापन भएको बताए ।
यस्तो छ कुशुमको स्टाटसः
कुलमानजी पनि यो हल्लै हल्लाको देशमा हल्लाबाटै ‘हिरो’ हुनुभएको हो । भारतबाट बिजुली किनेर बाल्नु भनेको हाम्रो नालायकी नै हो । आखिर भारतले चाहेको पनि त यही हो । लोडसेडिङका कारण नेपालमा ठूला जलविद्युत आयोजना अपरिहार्य भइसकेको थियो । जसरी भएपनि ठूला आयोजना सुरु गर्न हामी बाध्य हुँदै थियौं ।
त्यही बेलामा भारतबाट बिजुली किनेर लोडसेडीङ हटाइयो । अब उज्यालो पाएपछि किन चाहियो मेगा प्रोजेक्ट ? काम त चलिहाल्यो नी । हो, भारतले चाहेकै यही हो कि नेपालमा बिजुलीका लागि मेगा प्रोजेक्ट नबनोस्, नेपालका नदी–नाला चाहिँ उसले आफ्नो पानीको स्वार्थका लागि दोहन गर्न पाइरहोस् । कुलमानजी भारतको यही रणनीतिक स्वार्थको उहापोहमा हिरो बनाइनुभएको हो । बाँकी कुरा सब फजुल हो ।
यो देशका शासकहरुमा हिम्मत छ भने भटाभट मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट निर्माणतर्फ पहल थालोस् । जलश्रोतको धनी देशले भारतबाट उसले उपभोग गरेर बचेखुचेको रहल पहल बिजुली किनेर त्यसकै उज्यालोमा रमाउनु भनेको नकचरो पन हो, हुतीहारा पन हो । अतः कुलमानको जयजयकार गरिरहँदा यो तथ्य पनि नभुलौं ।
आज यमपञ्चकको चौथो दिन, गाई, गोरु र गोवर्द्धन पूजा गरी मनाइँदै
कैदीबन्दी प्रसाईंको उपचारका क्रममा मृत्यु